Madaxweyne Erdogan oo Hanjabaad culus hawada u marsiiyay labo Dal oo Khilaaf kala dhaxeeyo
Sunday September 06, 2020 - 21:00:06 in Wararka by Editor Caynaba News
Waxaa sii xoogeesanaya khilaafka siyaasadeed ee dowlada Turkiga kala dhaxeeya dowladaha Gariiga iyo Qubrus, waxaana
labada dhinac hawada isku marinayaan hanjabaadyo culus.
Khilaafka u dhaxeeya Turkiga iyo Dowladaha Gariiga iyo Qubrus ayaa salka ku haya xaduuda badda ee Bariga Badda dhexe (Mediterranean), waxaana khilaafka xoogeestay markii Turkiga bilaabay in Badda Mediterranean-ka baaro Gaaska iyo Batroolka.
Madaxweynaha Turkiga Rajab Dayib Erdogan oo shalay ka hadlay munaasabad ka dhacday magaalada Istanbuul ayaa ugu baaqay Gariiga in miiska wadahadalka yimaado ama u diyaar garoobo xanuun daran oo aysan horey u arag.
” Waxay fahmi doonaan in Turkiga leeyahay awood Siyaasadeed, Dhaqaale iyo militari oo uu ku burburiyo waraaqaha beenta ah ee soo qorteen Gariiga iyo Qubrus…” ayuu yiri Madaxweyne Erdogan.
Hanjabaadan adag ee kasoo yeertay Madaxweynaha Turkiga ayaa sare usii qaadeysa xiisada ka dhaxeysa dowladaha Turkiga iyo Gariiga oo kawada tirsan Isbaheysiga Gaashaan buurta NATO.
Isbaheysiga NATO ayaa wada dadaalo lagu heshiisiinayo dowladaha Turkiga iyo Gariira si looga baaqsado isku dhac labada dal ah, waxaana la filayaa in maalmaha soo aadan labada dal isugu yimaadaan miiska wadahadalka.